दलान नेपाल : २०७० - मधेश राजनितीको कालरात्री
२०७० - मधेश राजनितीको कालरात्री
नयां बर्ष ०७१ मा हामी छौ । हिजो राती विदा भएको ०७० मधेश राजनितीका लागी कस्तो रह्यो त ? धेरैको मनमा अनेकन विचारहरु आउन सक्लान । तर सम्रगमा विस ०७० मधेश राजनितीको निमित्त कालरात्री थियो । जनमत हुदा हुदै पनि मधेश राजनितीले आफनो हैसियत गुमाएको ०७० ले मधेशी पार्टीहरुको नेतृत्वहरु प्रति पनि अनेकन प्रश्न उठाएर हामीवाट विदा भएको छ । ती कयौन प्रशनहरुको उत्तर यो ०७१ को विभिन्न कालखण्डमा आउने नै छ । तर के यही नै यर्थात बन्नलान मधेश राजनितीको ?
यस्तो के भयो त ०७० मा जसले मधेश राजनितीलाई यसरी पछार्न पुगे । शुरु गरौ त्यहीवाट । ०७० को शुरु देखि नै सबै मधेशी पार्टीहरु दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको मिती पर्खर बसेका थिए । सबै मधेशी पार्टीहरु भित्र सके एकिकरण नत्र कम से कम चुनावी मोर्चाबन्दी बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको थियो । त्यही सन्दर्भमा महन्थ ठाकुरले सबै नेतृत्वहरुलाई सामुहिक चियापानको लागी आमन्त्रण गरे । तर उक्त चियापानलाई विभिन्न वाहाना देखाउदै उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार र राजेन्द्र महतो मौन रुपमा वहिष्कार गरे । चियापानमा साना मधेशी पार्टीहरु ठाकुरसंग एकिकरण गर्न आफु तयार रहेको बताएका थिए । खिलराज रेग्मीलाइृ सत्ता सुम्पनु भन्दा अघि बसेको मधेशी मोर्चाको बैठक बस्न सकेका थिएन । ठाकुरको धेरै प्रयास हुदाहुदै पनि मोर्चाको बैठक हुन सकेन । त्यही विचमा राजेन्द्र महतोले ठाकुर र गच्छदारलाई मधेशको गद्धार भन्दै यीनीहरुसंग कुनै प्रकार सहकार्य नगर्ने घोषणा गरीसकेका थिए । उता गच्छदारले आफु स्वघोषीतै भएपनि मोर्चाको नम्बर वन नेता भएकाले ठाकुरको नेतृत्वमा होईन कि मेरो नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी हुनुपर्ने दाउमा थिए । उनी ठाकुरलाई स्विकार्न नसकिने आफना निकटस्थहरुलाइ बताईसकेका थिए । अनेकन ठाउको दबाब पछि साउन तिर मोर्चाको बैठक भयो तमलोपाको पार्टी कार्यलयमा । जसमा गच्छदार सहभागी भएपनि महतो सहभागी भएन । महतोको पार्टीवाट सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी भए । त्यही बैठक मधेशी मोर्चाको अन्तिम बैठक हुन पुग्यो । बैठकवाट बाहिरिदै गर्दा गच्छदारले पत्रकारहरुसंग बोल्दै अगामी निर्वाचनमा मोर्चा कसरी संयुक्त रुपमा उम्मेदवार उठाउने वारेमा बैठक केन्द्रित रहेको बताउदै चाडै त्यसको टुगों लगाउने बताएका थिए । तर त्यसपछि सबै मधेशी पार्टी आ आफनो ढंगले चुनावी मैदानमा मधेश तिर ढौडिए । जेपी गुप्ता यो सबै गतिविधीवाट टाढा थिए । गुप्ताले त्यही विचमा मधेशी पार्टीहरुका शिर्ष नेतृत्वहरुलाई अमृतालिंगमको उपाधि थमाईदिएका थिए । जुन व्यापक चर्चामा थियो ।
४ मंसीरमा निर्वाचन भयो र त्यसको नतिजा आज तपाई हामी सबैको सामु छदै छ । मधेशी पार्टीहरुको लज्जाजनक हारले सबै पार्टीहरु धरमराउन पुगे । त्यसमा पनि समानुपातिक सभासदको व्यापारिकरणले सबै नेतृत्वहरु नराम्ररी नांगिए । त्यसपछि अहिले सम्म पनि कुनै पनि नेतृत्वले आफनो केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठक बोलाउन सकेका छैन । वरु सुरु भयो अर्को एकिकरणको हल्ला । उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर एकिकरण गर्दै छ भनेर । शुरुमा आम मधेशीहरु त्यसलाई पनि चासो पुर्वक हेरे र विस्तारै त्यो पनि असम्भव कथाको रुपमा देखीन थाले ।
यसरी हरेक कार्यमा असफल देखिन थालेका मधेशी नेतृत्वहरु ०७० को अन्तमा आउदा सम्म पुर्णरुपमा मधेशीहरुको नजरवाट तिरस्कृत भएको विश्लेषण मधेशमा हुन थालेको छ । त्यसो भए के उनीहरु तिरस्कृत भएसंगै के मधेशी जनमत पनि ओरालो लाग्ला र मधेशको राजनिती समाप्तिको बाटो समात्ला ? जानकारहरुको बुझाईमा त्यस्तो पनि नहोला । उनीहरु भन्छन, मधेशमा नयां शक्ति उदाउने सम्भावनालाई कसैले पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर प्रश्न छ, नयां शक्ति कसले र कसरी उदाउने हो । ०७० को कालरात्री मधेश राजनितीको कयापलट कसरी हुन्छ । त्यो नै आज सबैको चासोको बिषय बन्न पुगेको छ ।